Sida loo joogto ah Delete Messages on iPhone
"Waxa ay aheyd naxay in la ogaado in qaar ka mid ah fariimaha qoraalka ah aan la tirtiro bilood ka hor ayaa weli muujinaya kor u raadinaya diirada ku iPhone. Lahaa, anigu ma doorbidi fariimaha qoraalka ah, kuwaas oo u Caddaato. Sidee ayaan si joogta ah u tirtiri kartaa fariimaha qoraalka ah ka iPhone?" Haddii aad baadho 'text tirtiray iPhone raadinta' ama 'text tirtiray ifinaya iPhone', waxaad arki in dad badan oo ka hadlaynaa waxa ku saabsan. Ka dib markii ay gacanta tirka fariimaha qoraalka ah ee aad iPhone, waxaad u malaysay ay ka gudbeen. Dhab ahaantii, weli waa ay ku saabsan iPhone, laakiin noqon aan la arki karin. Oo qalab soo kabasho, sida Wondershare Dr.Fone ee macruufka , waxaad samayn kartaa kabsado, kuwaas oo fariimaha qoraalka ah tirtiray ka iPhone si fudud.
Sida loo joogto ah Delete Messages on iPhone? Si aad u qaban, waxaad u baahan tahay qalab xirfad caawimaad sababtoo ah aadan u dhigi kartaa gacanta. Hadda, ma jiraan qalab badan oo ujeedadaas ee lagu iibiyo suuqa la joogo. Wondershare SafeEraser waa qalab qiimihiisu isku dayaya. Waxaa si joogto ah u tirtirto doonaa fariimaha qoraalka ah ee aad iPhone, samaynta fariimaha qoraalka ah kuwaas tageen weligiis. Xitaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka, dadka ma soo kaban karto iyaga. Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka loogu sida si joogto ah u tirtirto qoraalka la Wondershare SafeEraser .
Your iPhone iyo cable USB ay;
A PC Windows ama Mac,
Tallaabada 1 Delete fariimaha qoraalka ah ee aad iPhone gacanta
Tubada Messages app> tuubada Edit> jaftaa goobo Read, ka dibna aad ka saari kara wadahadalka oo dhan ka iPhone. Ama ka jaftaa in la furo wada hadal ah> tuubada on fariin kasta oo> jaftaa 'More'. Ka dibna waxaad tirtiri kartaa fariin kasta oo wada hadalka waxa aad u baahan tahay. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u malaynaysaa in aad tirtiray qoraalka ka iPhone, Laakiinse adigu waad ka heli kartaa in diirada. Ama ugu yaraan, waxaad isticmaali kartaa software soo kabashada, sida Wondershare Dr.Fone ee macruufka inuu ka soo kabsado, kuwaas oo fariimaha qoraalka ah tirtiray ka iPhone.
Hel version maxkamad xaq ah Wondershare SafeEraser. Waa qalab desktop ah. Labada qeybood oo Windows iyo Mac waxaa laga heli karaa. Ku rakib iyo abuurtaan barnaamijka on your computer. Connect aad iPhone la computer via cable USB ay aad. Ka dib markaas, waxaad ka arki kartaa barnaamijka ogaadaa aad iPhone si toos ah.
Tallaabada 3 Scan fariimaha qoraalka ah la tirtiro
On barnaamijka, guji "masixi tirtiray Files" khaanadda tagay. Daaqadda midig, guji "Start". Markaas barnaamijka uu bilaabo inuu iskaan fariimaha qoraalka ah aad tirtiray in tallaabo 1.
Fiiro gaar ah: aad dareentay laga yaabaa in ay jiraan wax khiyaar ah "masixi All Data". Doorashadan waxa loogu tala galay dadka isticmaala oo iska iibin doonaan ama ha iska bixin taleefannadooda. By isticmaalaya Doorashadan, dhammaan xogta ku saabsan iPhone ah in si joogto ah la tirtiro doonaa.
Tallaabada 4 Si joogto ah u tirtirto fariimaha ku iPhone
Marka scan la dhammeeyo, aad awoodo si aad u hubiso 'Messages' inay ku eegaan oo dhan farriimo aad u socoto si joogto ah u tirtirto. Riix 'masixi Hadda' in ay tirtirto fariimaha qoraalka ah ka iPhone gabi ahaanba.
Fiiro gaar ah: Si loo hubiyo in farriimo qoraal ah, kuwaas oo aan marnaba uu ugu qoran yahay iPhone mar kale, xataa ka dib marka aad soo celinta kaga imaanayo Lugood ah, marka la tirtiro fariimaha qoraalka ah ee aad iPhone, Wondershare SafeEraser sidoo kale waxay tirtirtaa u-ekaanta fariimaha qoraalka ah, kuwaas oo aad gurmad Lugood.
Download SafeEraser Wondershare si aad u aragto sida ay u shaqayso!
Si joogto ah masixi iPad Data u Iibinta
Permenently Delete Songs ka iPhone r
> Resource > masixi > Sida loo joogto ah Delete fariimaha qoraalka ka iPhone